Yin Khat Pan, Author at Yin Khat Pan - Page2of 3
Articles by Yin Khat Pan
ချစ်သူဟောင်းရဲ့ မွေးနေ့ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စနောက်ခဲ့တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ကြောင့် အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ G Fatt
September 19, 2020 Yin Khat Pan 0
လူငယ်​​တွေရင်​ထဲထိ​စေတဲ့သီချင်း​လေး​တွေကို မိမိုက်​တဲ့စာသား​လေး​တွေနဲ့​ရေးစပ်​ပြီး သီဆိုတတ်​သူ G Fatt က​တော့ ဂီ​တ​လောကမှာ နာမည်​တစ်​ခုရ​နေတဲ့အဆို​တော်​တစ်​ဦးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အနုပညာရှင်​တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ G Fatt ဟာ ရည်းစား​ဟောင်းဖြစ်​သူနဲ့ လမ်းခွဲထားတာ ကာလတစ်​ခုရှိ​နေပြီဆို​ပေမယ့် လူမှုစာမျက်​နှာ​ပေါ်က သတင်း​တချို့​ကြောင့် သူတို့စုံတွဲ ပြန်​တွဲကြမှာလားလို့ ပရိသတ်​ထင်​​ကြေး​ပေး​နေတာကို​တွေ့ရပါတယ်​။ G Fattက​တော့ ” အမေဆိုသည်မှာ ရုပ်တည်နဲ့ လာစတက်သေးတာ”လို့ဆိုတဲ့ စာသား​လေးနဲ့ မိခင်​ဖြစ်​သူ Happy Birthday လို့​ရေးပို့ထားတဲ့စာသား​လေးကို My Day မှာတင်​ထားခဲ့ပါတယ်​။ စက်​တင်​ဘာဟာ […]
September 17, 2020 Yin Khat Pan 0
တည်​ငြိမ်​တဲ့အလှ စွဲမက်​ဖွယ်​​ကောက်​​ကြောင်းတို့​ကြောင့် ပုရိသ​တွေအသဲစွဲမင်းသမီးတစ်​လက်​ဖြစ်​တဲ့ ​မေပန်းချီက​တော့ ကိုဗစ်​ကာလအတွင်း အ​ခြေအ​နေနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး အ​ကြွေး​တွေဘာ​တွေ​တော့​ကြောက်​တယ်​ ပိုက်​ဆံမရှိရင်​ဆားနဲ့ပဲစား​မယ်​လို့ ​ဆိုလာခဲ့ပါတယ်​။ ဒီကာလအတွင်းမှာ လူတန်းစား​တော်​​တော်​များများ ဝင်​​ငွေအခက်​ကြုံရသလို ရှုတင်​များလည်းရပ်​ဆိုင်းထားတဲ့အတွက်​ အနုပညာရှင်​တချို့လည်း ဝင်​​ငွေနည်းပါး​နေချိန်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​မေပန်းချီက​တော့ ကိုဗစ်​ ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်​​တော့ ပြင်​ဦးလွင်​သွားပြီး သူ့ရဲ့သီချင်း​လေးကို MTV ရိုက်​ဖို့လုပ်​ထားတာ ပျက်​သွား​ပေမယ့် အ​ခြေအ​နေက ပြင်းထန်​​တော့ ကိုယ်​ Q မဝင်​ရ​အောင်​ပဲကြိုးစား​နေရတယ်​လို့ ​ပြောပြခဲ့ပြီး ​ရောဂါကြီးက ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ကြာဦးမယ်​မသိတာ​ကြောင့် စီးပွား​ရေးကို ​လော​လောဆယ်​ အိမ်​မှာ​နေရင်း ဘာလုပ်​ရမလဲဆိုတာပဲ​တွေး​နေမိတယ်​လို့ […]
ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ပြီး ရတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ တန်ဖိုးကြီး အိုင်ဖုန်း တစ်လုံးဝယ်လိုက်တဲ့ နိုင်နိုင်းရဲ့ သမီးလေး စန္ဒီချို
September 16, 2020 Yin Khat Pan 0
ပြည်​သူချစ်​ မင်းသားတစ်​လက်​ဖြစ်​တဲ့ နိုင်းနိုင်းက​တော့ ချစ်​စဖွယ်​ က​လေး ၄​ယောက်​နဲ့ ​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​မိသားစုဘဝ​လေးကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားသူ တစ်​ဦးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ နိုင်းနိုင်းဟာ လက်​ရှိမြန်​မာနိုင်​ငံကို ပြန်​လည်​​ရောက်​ရှိ​နေပေမယ့် မိသားစုရှိရာ အ​မေရိကန်​ကို မကြာခဏပြန်​ပြီး သူ့ရဲ့ ရဲ​ဘော်​​တွေဖြစ်​တဲ့ က​လေး ၄​ယောက်​ကို အချိန်​​ပေးသူလည်းဖြစ်​ပါတယ်​။ အ​ဝေးမှာရှိချိန်​မှာလည်း ချစ်​ဇနီး စန္ဒီချိုနဲ့အတူ က​လေး​တွေကို အဆက်​အသွယ်​မပြတ်​​အောင်​ ​နေသူ နိုင်းနိုင်းက​တော့ သမီး​လေးရဲ့ လိမ္မာသိတတ်​မှု​ကြောင့် ​ပျော်​ရွှင်​စရာ​လေးကြုံလာရပါတယ်​။ ဒါက​တော့ နိုင်းနိုင်းရဲ့ သမီးကြီး​လေးက သူ့လုပ်​ခနဲ့ ကိုယ်​လိုချင်​တဲ့ […]
ဆိုင်းသမားဘဝ တုန်းက ဦးဗေလုဝ ရဲ့ ကျေးဇူးတစ်ခုကို ပြောပြလာတဲ့ လူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်
September 14, 2020 Yin Khat Pan 0
ရုပ်​ရှင်​ဗီဒီယို​လောကရဲ့ နာမည်​ကြီး ဟာသသရုပ်​​ဆောင်​တစ်​ဦးအဖြစ်​ ရပ်​တည်​​နေသူ ဒိန်း​ဒေါင်​က​တော့ သူ သရုပ်​​ဆောင်​​လောထဲကို မဝင်​​ရောက်​ခင်​ကတည်းက ကူညီ​ပေးခဲ့တဲ့ ​ကျေးဇူးရှိသူတစ်​ဦးအ​ကြောင်းကို ထုတ်​​ဖော်​​ပြောကြားခဲ့တယ်​။ အဲ့တာက​တော့ စာ​ရေးဆရာတစ်​ဦးလည်းဖြစ်​ ဝါရင့်ဟာသသရုပ်​​ဆောင်​ကြီးလည်းဖြစ်​တဲ့ ဦး​ဗေလုဝပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ “ ဦးဗေဆိုတာက ဒိန်းဒေါင်ရယ်လို့ ပရိသတ်သိအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ လူတွေထဲမှာ သူက ထိပ်ဆုံးကပါ။ အရင်တုန်းက ဆိုင်းဝိုင်းတွေ နောက်လိုက်ဘဝမှာ ကိုယ်က သွက်သွက်လက်လက် ပြတ်လုံး ပြတ်တတ်တော့ သူ့ထက်အရင်ကျော်မှာစိုးပြီး မခေါ်ကြတဲ့ လူတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ဗေကြီးကတော့ ကျွန်တော့်ကို […]
နောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အစီအစဥ် ရှိ/မရှိ ဆိုတာကို ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ချမ်းမီမီကို
September 13, 2020 Yin Khat Pan 0
အလှမယ်​တစ်​​ယောက်​အ​နေနဲ့ အနုပညာ​လမ်း​ကြောင်း​ပေါ်​ရောက်​ရှိလာတဲ့ ​​မော်​ဒယ်​မင်းသမီး ချမ်းမီမီကိုက​တော့ ဗီဒီယို ရုပ်​ရှင်​​လောကက​နေ အိမ်​​ထောင်​ပြုပြီး​နောက်​ပိုင်း ထွက်​သွားခဲ့တာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အခုအချိန်​မှာ​တော့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ လမ်းခွဲပြီး အနုပညာ​လောကကို ပြန်​လည်​ဝင်​​ရောက်​လာ​တော့မယ့် ချမ်းမီမီကို ကို တည်​ငြိမ်​​အေးချမ်းတဲ့ မျက်​နှာထား​လေးနဲ့ အင်​တာဗျူး​တွေမှာ ​တွေ့မြင်​ရမှာပါ။ သားလေးနဲ့အတူ ဘဝကို​ရှေ့ဆက်​​နေတဲ့ ချမ်းမီမီကို ကို ​နောက်​အိမ်​​ထောင်​ပြုဖို့အစီအစဉ်​ရှိ မရှိ​မေးရာမှာ​တော့ “ချမ်းမီက စကားကိုတော့ အကုန်မပြောချင်ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ထပ်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်မပြုချင်ဘူး။ ကိုယ့်သားကိုပဲ အချိန်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်ပေမယ့် စကားကျွံရင် […]
ကိုယ်က ရည်းစားတောင်မထားဖူးတဲ့ အပျိုလေးဆိုတော့ သိက္ခာကျသွားတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ မမဆောင်း
ဇာတ်​ဝင်​​တေး​တွေမှာသာမက ရုပ်​ရှင်​ကားကြီး​တွေပါ ရိုက်​ကူးခဲ့​ပေမယ့် အကယ်​ဒမီနဲ့လွဲခဲ့သူ မင်းသမီး ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်းကတော့ သူ့ရဲ့အင်​တာဗျူးတစ်​ခုမှာ ​ဖြေဆိုမှုရှုပ်​​ထွေးသွားရာက​နေ ပရိသတ်​​တွေကြား ​လူ​ပြောများခဲ့သူတစ်​ဦးပါ။ သူမဟာ ​”​ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း ရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ်လား? ဘောလုံးဥက္ကဌလား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေက မြင့်တက်လာရာမှ ပရိသတိစိတ်​ဝင်​စားခံလာခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။ သူ့ရဲ့အင်​တာဗျူး ​ဖြေဆိုပုံ​တွေ ပွင့်လင်းတဲ့​ပြောဟန်​​တွေ​ကြောင့် ပရိသတ်​​တွေကြား နားလည်​မှုလွဲစရာ​တွေ ဖြစ်​လာခဲ့ရပြီး အခုတစ်​ခါမှာလည်း စကားမှားခဲ့တာ​ကြောင့် မင်းသားရန်​​အောင်​ကို ​စော်​ကားသလိုဖြစ်​ခဲ့တာကို စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​တာ​ကြောင့် ပြန်​လည်​​တောင်းပန်​ခဲ့ပါတယ်​။ “စကား​ပြောတာ ဘရိတ်​မရှိ​တော့ စည်းမရှိသလိုဖြစ်​သွားတာ​ပေါ့​နော်​ […]
သားအဖအရင်း တွေဖြစ်ကြောင်း မယုံတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို အသိပေးပြောပြလာတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးမိုးဒီ
September 12, 2020 Yin Khat Pan 0
လူရွှင်​​တော်​​တွေဟာ ရုပ်​ရှင်​​လောကမစခင်​ အငြိမ့်သဘင်​​ခေတ်​ကတည်းက ပြည်​သူ​တွေကို ဟာဒယရွှင်​​ဆေးတိုက်​​ကျွေးခဲ့ကြတဲ့ ပြည်​သူ့အချစ်​​တော်​​တွေပဲဖြစ်​ပါတယ်​ မရိုးနိုင်​တဲ့ပြက်​လုံး​တွေနဲ့ ပြည်​သူကို​ တင်​ဆက်​​ပေး​နေကျ ဦးမိုးဒီက​တော့ သားဖြစ်​သူ လူရွှင်​​တော်​​ကောင်းစံနဲ့အင်​တာဗျူးတစ်​ခု​ဖြေရင်​ ပရိသတ်​ကို အံ့သြ​​စေမယ့် အ​ကြောင်း​လေးကို ဟာသ​နှောရင်း ​ပြောလိုက်​ပြန်​ပါတယ်​။ ဦးမိုးဒီနဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ လူရွှင်​​တော်​ ​ကောင်းစံကို သားအဖလို့ လူ​တွေသိပ်​မသိကြပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီးဦးကောင်းစံက​တော့ ” သားအဖလို့ မသိတာကိုတော့ အပြစ်မယူပါဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ ရုပ်ချင်းက မတူဘူးလေ။ အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ ဖေဖေက ဥပတိရုပ် တအား […]
၁၁ နှစ်ကြာ လက်တွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူလေး ကို စိန်တစ်ဆင်စာ ငွေကြေးအပြည့်အစုံနဲ့ တင်တောင်းလိုက်တဲ့ နိုင်းဝမ်း
September 11, 2020 Yin Khat Pan 0
လူငယ်​​တွေပါးစပ်​ဖျားမှာ ​ခေတ်​စား​​စေတဲ့သီချင်းများစွာကို​​ ​ရေးသားသီဆို​လေ့ရှိတဲ့ အဆို​တော်​ နိုင်းဝမ်းက​တော့ ချစ်​သူရဲ့​မွေး​နေ့​လေးမှာ မိသားဖသားပီပီ သွား​ရောက်​တင်​​တောင်းခဲ့တယ်​လို့သိရပါတယ်​။ မိဘ​တွေခွင့်ပြုချက်​ရရှိခဲ့ပြီး သူကိုယ်​တိုင်​ရှာ​ဖွေထားတဲ့ ​ငွေ​ကြေး​တွေနဲ့ တင်​​တောင်းရတာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ နိုင်းဝမ်းတစ်​​ယောက်​သိပ်​ကို​ပျော်​ရွှင်​​နေတာပါ။ ဒါကို နိုင်းဝမ်းက “ဒီနေ့က ကျွန်တော့ဘဝအတွက် အပျော်ဆုံးနေ့တွေထဲက နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်..လက်ထပ်ဖို့အထိရည်ရွယ်ပြီးအရမ်းချစ်ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မိဘရဲ့အထောက်အပံ့မယူပဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ငွေလေးတွေနဲ့တင်တောင်းနိုင်ခဲ့လို့ပါ💪🏻💪🏻💪🏻ကျွန်တော်တို့စုံတွဲရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်တဲ့ဒီရက်လေးမှာ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်သွားအောင် မြန်မာ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအတိုင်း မိသားဖသားပီပီတောင်းရမ်းခဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့ ဒီနှစ်ဝါကျွတ်ရင် လက်ထပ်နိုင်ဖို့ ချစ်သူရဲ့မိဘတွေထံမှ ခွင့်ပြုချက်လဲရခဲ့ပါပြီဗျ😇😇😇 ဒီဇင်ဘာလ ၉ရက်နေ့မှာ တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြမှာဖြစ်ပြီး၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကိုတော့ ကိုဗစ်ကာလပြီးတာနဲ့ကျင်းပကြမှာဖြစ်ပါတယ်😍😍😍(ဒီထက်အကြီးကြီးတွေရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမဲ့ […]
ပရိတ်သတ်တွေ လုံးဝ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ငယ်ဘဝက ဓာတ်ပုံလေးတွေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
September 10, 2020 Yin Khat Pan 0
တစ်ချိန်က တီဗီဖန်သားပြင်ထက်မှာ ချစ်စဖွယ်ဟန်ပန်နဲ့ နေရာယူခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ အခုအချိန်ထိ ပြည်သူချစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲပါပဲ။ ထက်ထက်မိုးဦးဟာ ကြော်ငြာတော်တော်များများရဲ့မျက်နှာဖုံးဖြစ်ရုံသာမက ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာလည်း အံ့ဝင်ခွင်ကျသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဝါရင့်မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ve Ve ကြော်ငြာ Good Morning ကြော်ငြာ စတဲ့ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ သွက်လက်စွာပါဝင်ထားတဲ့ သူမရဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေ သတိရနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကက ခေတ္တအနားယူခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ လက်လှမ်းမီသလောက် အလုပ်တွေပြန်လုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးကို ဖေ့ဘွက်စာမျက်နှာမှာ Live […]
ခိုင်ခိုင်မာမာ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကို ပရိတ်သတ်တွေဆီ အသိပေးလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်
September 9, 2020 Yin Khat Pan 0
သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ပရိသတ်ရင်ထဲ အခိုင်အမာနေရာယူထားတဲ့ ရဲတိုက်ကတော့ ပရိသတ်မကြိုက်တဲ့လောကကြီးကို မသွားတော့ဘူးလို့ ဆိုလာပါတယ်။ ရဲတိုက်က ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုလောကမှာ လူကြိုက်များ အားပေးခံခဲ့ရရုံသာမက မျက်ဝန်းတွေရဲ့သက်ဝင်မှုကြောင့် သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သဘောကျခဲ့ကြရတာပါ။ ရဲတိုက်တစ်ယောက် လမ်းမှားရောက်ပြီး သူ့ရဲ့မှားယွင်းမှုအတွက် အပြစ်ပြန်ပေးဆပ်ကာ အခုအချိန်မှာတော့ ပရိသတ်ရဲ့ရှေ့ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတိုက်ဟာ ပရိသတ်ရဲ့အားပေးလက်ခံမှုကို ခံရတဲ့ မင်းသားပီပီ ပရိသတ်ရှေ့ကို ဒဏ္ဏာရီမိုးဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သူပါ။ ပရိသတ်တွေရင်ထဲ ထိစေခဲ့တဲ့ ဒီကားလေးထဲမှာလည်း ရဲတိုက်ရဲ့ပြည့်ဝတဲ့အနုပညာအရည်အသွေးတွေကို […]